Ny Teny voalohany: Aza manana andriamani-kafa
"Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta, tamin’ny trano nahandevozana. Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany." Eksodosy 20:1-3
"Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; fa Jehovah no nanao ny lanitra." Salamo 96:5
Babo tany Egypta ny vahoakan’Andriamanitra, niharan’ny famoretan’ny Farao. Andevo nampahoriana fatratra izy ireo, ka feno fangidiana sy nangirifiry noho ny didin’ny Farao nampamono ny zazalahy rehetra vao teraka. Hitan’Andriamanitra ny famoizam-pon’ny vahoakany, nanoloana izany toe-javatra tsy ahitan’izy ireo vahaolana izany, ka niditra an-tsehatra Izy, nanao fahagagana lehibe, hanafahany azy ireo. Naneho fahamoram-po Izy, niaro azy ireo mandra-pahafany tanteraka: natelin’ny ranomasina Mena ny mpampijaly azy ireo (Eksodosy 14).
Teo no ho eo ihany io vahoaka io dia nihira ny nanafahana azy sy nitsaoka Ilay Andriamanitra namonjy azy (Eksodosy 15).
Nefa ny Teny voalohany dia momba ny fitsaohana tokony ho an’Andriamanitra irery ihany: “Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany”. Nahoana Izy no tsy maintsy nanantitrantitra izany? Io Andriamanitra tokana vao avy nanafaka azy ireo tamin-kery io ve, tsy tokony ho efa nambabo ny fon’ireo rehetra novonjeny?
Tsia, fa mifanohitra amin’izany aza. Nandritra ny nanomezan’Andriamanitra ireo didiny tamin’i Mosesy teny an-tendrombohitra, ny vahoaka kosa teny an-tany lemaka dia nanamboatra sampy, ombilahikely volamena, sarina andriamanitry ny Egyptiana, ary nivavaka tamin’izany!
Ho antsika ankehitriny, dia tsotra ny hevitr’izany kisarisary izany. Egypta dia izao tontolo izao, izay mamoritra antsika noho ny hasiahany, mamitaka antsika amin’ireo filany, mamatotra antsika amin’ireo sampiny, mamotika antsika amin’ireo fahazaran-dratsiny. Ny Farao dia ny devoly, ilay andrianan’izao tontolo izao.
Niditra an-tsehatra Andriamanitra, hanokatra ho antsika lalam-panafahana mbola mahagaga lavitra noho ilay taloha, amin’ny finoana fotsiny ihany an’i Jesosy Kristy. Raha nanaraka io lalana io ianao, raha novonjen’i Jesosy, inona no “iankohofanao” ankehitriny, Iza no Andriamanitrao?